IMatrox VERO ngoku ixhasa ukurekhodwa kwePCAP kwe-ST 2110 Ukuchongwa | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » IMatrox VERO ngoku ixhasa ukurekhodwa kwePCAP kwe-ST 2110 Ukuchongwa
IMatrox VERO ngoku ixhasa ukurekhodwa kwePCAP kwe-ST 2110 Ukuchongwa
VERO ST 2110 umvelisi womqondiso kunye nezixhobo zokuqonda isifo zenza ukuba abavelisi kunye nabasasazi baqinisekise ngokuzithemba iimeko ze-ST 2110
Ividiyo yeMatrox® namhlanje yazisa ukuba inqaku lerekhodi lePCAP ngoku liyafumaneka neMatrox VERO Umvelisi we-ST 2110 kunye nesixhobo sokuqonda isifo. Ifaka umda wendlela omkhulu, ipakethi-yokuphulukana ngaphandle kokucinezelwa ukuya kuthi ga kwi-UHD ST 2110-20 yevidiyo ene-timestamping echanekileyo, i-VERO ithatha umfanekiso ocacileyo wokugcwala kwenethiwekhi kwifayile ye-PCAP yohlalutyo olufanelekileyo lwasemva kwexesha kunye nokufakwa kwangaphambili I-European Broadcasting Union Live IP yezixhobo zeSoftware (EBU LIST®). Ngokurekhodwa kwe-PCAP kudityaniswe ecaleni komvelisi wophawu oluhlengahlengisiweyo kunye noxilongo lwesiginali ngaphakathi kwento yonke inye, abasasazi, abahlanganisi benkqubo, kunye nabavelisi banokuqinisekisa ngokuzithemba izixhobo ze-ST 2110 zokuthotyelwa ngaphambi kokuthunyelwa.
Iimpawu eziphambili zeMatrox VERO kunye nezibonelelo:
Umthumeli we-ST 2110: Unika umthumeli wolungelelwaniso we-ST 2110 ovumela abasebenzisi ukuba bavavanye ukuthotyelwa komamkeli kunye nokomelela kwimeko ezifanelekileyo.
Ukurekhodwa kwe-PCAP: Ukuthatha umfanekiso ocacileyo wokugcwala kwenethiwekhi- kubandakanya ukuhamba kwevidiyo ye-UHD- kwifayile ye-PCAP yokufumanisa isifo se-ST 2110.
Umdibaniso we-EBU LIST: Ukuza kufakelwe kwangaphambili kunye ne-European Broadcasting Union Live IP Software Toolkit (EBU LIST) isixhobo sokuqonda isifo kunye nokufikelela.
HD/ Igcwele HD/ UHD: Iquka iindlela ezimbini zokuzimela ezizimeleyo, nganye inokukwazi ukuvelisa ividiyo enye, ukuya kwii-audio ezine, kunye nedatha enye yokuhamba. Elinye lamajelo amabini linokuzinikezela kwizisombululo ezizimeleyo zevidiyo kunye nereyithi zesakhelo-ukuya kwi-UHD kwii-60 FPS- ezivumela abavelisi bezixhobo ze-ST 2110 ukuba baqinisekise izigqibo ezininzi ngaxeshanye, kubandakanya nenkxaso ye-ST 2022-7.
Ujongano olusebenzayo olusekwe kwiwebhu: Isebenza kunye nasiphi na isikhangeli sewebhu, esenza ukuba abasebenzisi basebenzise izixhobo zokuqonda isifo naphi na kwinethiwekhi usebenzisa nayiphi na iPC, ithebhulethi, okanye isixhobo esiphathwayo.
"Njengokuba izibonelelo ze-ST 2110 zibonakala ngakumbi, sibona inani elandayo lamaziko osasazo akha ukusebenza kwabo kwe-ST 2110," utshilo uFrancesco Scartozzi, VP wentengiso kunye nophuhliso lwamashishini, uSasazo kunye neMedia Group kwiMatrox Video. Inyathelo lokuqala lokwakha i-IP yabo kukwenza ibhokisi yesanti ye-ST 2110. Abamkeli besisombululo sokuqala seMatrox VERO bayazibona izibonelelo ezikhawulezileyo zokuba isixhobo esinye sivelise iintlobo ezahlukeneyo zeempawu ze-ST 2110, ekugqibeleni kuvavanye ukomelela kwendalo. Ngoku ngokurekhodwa kwePCAP, eli candelo liya lisomelela ngakumbi, likwazi ukubamba ukugcwala kwenethiwekhi kuqhubekeko nohlalutyo lwefayile kuluhlu lwe-EBU. ”
Inqaku elitsha lokurekhoda iPCAP ngoku liyafumaneka kumqhubi weMatrox VERO, ngelixa umvelisi wesiginali ye-Matrox VERO ST 2110 kunye nesixhobo sokuqonda isifo ngoku sifumaneka Inethiwekhi kaMatrox yomhlaba wonke yabathengisi abagunyazisiweyo. Ukucela idemo okanye ufunde okungakumbi, Nxibelelana noMatrox.
landela Ividiyo yeMatrox:
IMatrox VERO ngoku ixhasa ukurekhodwa kwePCAP kwe-ST 2110 Ukuchongwa - Februwari 18, 2021
IMatrox yazisa ngoLawulo lweKVM kwi-Intanethi - Februwari 10, 2021
Ividiyo yeMatrox yazisa ngokuPhuculweyo kokuSebenza kwe-KVM-ngaphezulu-kwe-IP yeNewTek yokuPhila kweMveliso yokuSebenza - Januwari 28, 2021
soSasazo isixhobo sokuqonda isifo IMATROX umvelisi womqondiso ST2110 I-VERO 2021-02-18
Previous: Amaqabane eTeradek aneKhamera yeFreyimu.io kwiLifu (C2C) yokuHlaziya ukuHamba koMsebenzi
next: Amathuba okuchongwa kwi-HPA Tech Retreat Supersession